Indonesia in Focus: Dalbanayaan Science (waxbarasho) oo leh habab kala duwan
Dalbanayaan Science (waxbarasho) oo leh habab kala duwan
Kortaan ayaa waxaa ma uusan dhammayn (320)
(Qaybta saddex boqol iyo labaatan), Depok, West Java, Indonesia, 24 July 2015, 19:50 pm)
Ujeeddada (waxbarasho) barashada aadanaha ahayd si ay yeelan karaan aqoon ku filan ama xirfad leh labadaba si loo wanaajiyo heerka tayada nolosha ee aadanaha (mushaar wanaagsan / ku filan) ama si ay u ogaadaan nuxurka ujeedada dhabta ah ee aadanaha (fiqi).
Waxaa jira dhowr waji search aadanaha ee aqoontu waa hab caadi ma (cilmaani) waxaa loogu talagalay sayniska iyo taaban karo sayniska, iyo falsafada raadinaya.
Sidoo kale waxaa jira habab cilmi dooni iyada oo loo marayo hab diimeed, iyada oo Quraanka iyo Xadiiska ah (Sunnah / al-xigmad), halka waxbarasho ka kooban oo ka mid ah Quraanka iyo Sunnaha ayaa sidoo kale sameeyay cilmi ahaan loo xushay in la kala saaro kuwaas oo ansax ah Sunnah (dhab ah), Xasan (oggol yahay) ama dhoif (sunnah been / sunnah oo aan asal ahaan).
In dhaqanka ee Indonesia, sida dabeecadda ah qaar ka mid ah Muslimiinta waxaa la aqristay Al Quraanka Surah Yasin habeen walba Khamiistii (habeenkii Jimcaha) ay adeegsanayeen dhoif xadiisyada (daciif / asal lahayn) oo sheegay in ay Suurad Yaasiin ee wadnaha (hooyadiis) Al Aayado-ah.
Caado kale waa caado Tahlilan (akhri salaadda iyo Aqri warqada Yasin iyo cuntada) maalinta saddex, in toddoba iyo 100 maalmood ama 40 maalmood ama 1000 maalmood geeridii ku timid qoyska marxuumka ka dib.
In kastoo ay jiraan gabi ahaanba waa amarka reer binu Quraanka iyo Sunnaha ku saabsan Tahlilal, tan iyo intii afar imaamyada, Imam Syafei, Imam Malik, Imam Xanafi oo Hanbali Imam iyo kuwa kale Imam ku soo xiganaya Quraanka iyo Sunna ee la xukumay oo mamnuucay dhacdo Tahlilan (Kaul) kuwaas oo run ahaantii la raaco caadooyinka diinta Hindu / animist.
Sidaas hab cilmiyaysan aan u baran karo ee Quraanka iyo Sunnaha oo ku dhaqma cibaadada la mid ah iyo ku dhaqanka Nabiga sida oo isaga saaxiibbadiis ah.
Dad badan oo ereyga Ilaah iyo Sunnaha in doodo dhaqaalaha aadanaha waxbarasho (ganacsiga) iyo cilmiga siyaasadda, xiddigaha iyo cilmiga kale ah.
Waxaa intaa dheer, Quran ugu horeysay lagu soo dajiyey (hoos) in Nabiga yahay Al suurada ugu Alaq,
"Read it! Iyada oo magaca Eebahaa yaa abuuray. "(Aayadda 1). In koorsada ugu horeeyay, taas oo ah "akhri", ayaa furay danta ugu horeysay ee horumarinta dheeraad ah oo Diinta. Nabiga u sheegay inuu akhriyo dajinta ayaa waxaa lagu dhawaaqi doonaa in isaga in magaca Ilaah, Ilaah waxa uu abuuray.
Oo kuwaasu "Abuuritaanka nin Calaqo." (Aayadda 2). Waa kuwee kaalinta labaad nuthfah, kuwaas oo plume biyo ah oo uu soo xoojiyey ee ka shahwada ee ragga naag ku taalba, kaasoo 40 maalmood ka dib, biyo la casriyeeyo si loo noqon xinjir dhiig, iyo dhiig-xinjirowga in ka dib lahaa mariyo iyo sidoo kale iyada oo 40 ka dib maalinta, waxay noqotaa hal mar ah oo jidhka (Mudhghah).
Nebigu ma ahaa wanaagsan akhriska. Isagu waa Umiga ah, taas oo loo fasiri karo waxna qorin, aan aad u fiican ee qoraalka iyo akhriska ahna Iskama wanaagsan ee qoraal ah. Laakiin Jibril sidoo kale ku boorriyay in ay saddex jeer in uu akhriyo. In kasta oo uusan waxba ka fiican tahay qoraal, laakiin aayaadkiisa si toos ah qaatay ay isaga Gabriel, baray, oo uu sidaas ku xafidi karo by caksiga, isaga la Sidaa darteed waxaa laga akhrisan kartaa. Ilaah kan wax walba abuuray. Rasuulladu ma ku fiican tahay qoraal iyo akhris u noqon xariif doonaa ka dib akhriyo aayaadka muujin isaga. Oo sidaas daraaddeed markii Aayaadka si ay u soo degay ka dib, waxa uu la magacaabi doonaa Quraanka. Iyo Qur'aanka taas oo macneheedu yahay waxaa akhriska. Sida haddii Rabbigu wuxuu yiri: "akhri, on Me qudrat iyo Iradat."
Sheikh Muhammad Abduh ee Tafsiirka Juzu 'Ammanya yiri: "Taasi waa Ilaaha Qaadirka ah ka dhigay nin aan ahayn shahwada, loo bedelay in ay hal mar ah oo dhiig ah, markaas noqon qabka buuxda aadanaha, shaki la'aan awood u leeyahay inuu u geysto awoodda qofku in uu ku akhri, oo loo yaqaan Umiga ah, ma fiicna reading oo qoraal ah. Sidaas darteed haddii aan baaro content ee Xadiiska in in Nabiga codsaday in ay saddex jeer, seddex jeer sidoo kale, in uu si daacad ah ku jawaabay in uu ma ahaa wanaagsan akhriska, saddex jeer ayaa sidoo kale Gabriel hugged isaga adag tahay, waayo, isaga qancin lahaayeen in tan iyo wakhtigaas waxaa uu awood u lahayn in ay isaga akhri , sidee ka badan ayuu yahay Al-Insan al-Kamil, ninkii qummanna. Qaar badan oo dheeraad ah waa in la akhriyo ka dib on. Waxa muhiimka ah waa in loo baahan yahay aasaasiga ah in la ogaado wax kasta way akhrin dambe wax kale waa magaca Ilaah si kastaba ha ahaatee. "
"Read it! Oo Ilaah wuxuu kuu adkaade. "(Aayadda 3). Marka qeybta kowaad in uu u sheegay in uu akhriyo in magaca Ilaah nin oo ka abuuray Calaq, gudbiyay mar kale u sheegay inuu akhriyo magaca Ilaah. In ay magaca Rabbiga mar walba waa in la qaado si ay dib ugu Ilaaha nool waa adkaade, ajiir, jecel oo aan jecel in Caalamka.
"Wuxuu kaas oo baray sida Qalinka." (Aayadda 4). Taasi waa mudnaan Ilaah mar kale. Taasina waa ammaan ugu sareeya. Waa kuwee isaga baray ninkii cilmiga kala duwan, waxyaalaha qarsoon furay, u dhiibay furaha furitaanka khasnadda Ilaah, in la Qalinka. Iyadoo qalinka ah! Intaa waxaa dheer in carrabka inuu wax akhriyo, Ilaah wuxuu ka dhigay qalinka sidoo kale in sayniska loo diiwaan galiyo. Pena wuu barafoobay oo adag, oo aan nolosha, laakiin qoray qalinka waa noocyo kala duwan oo wax lagu shuban karto nin "Bar nin wax isagu garan maayo." (Aayadda 5).
Imtithaal ninkii ugu horeeyay ee in la isticmaalo Qalinka baro. Ka dib markii iyada isticmaalka xariif ah ee sayniska Qalam in badan ayaa bixiyey Ilaah baa isagii u, sidaas oo kale ayuu yiri karaa in dhawaan la helay aqoonta leh ee hadda jira Pen ee gacanta:
"Science waa sida ciyaar iyo qoraalka waa Xarkaha in ciyaarta. Sidaa darteed, xadhig xidh buruanmu weecan. "
Markaas cutubka shanaad heshiis this, sida hoos waxaan descry Eray kooban oo Rabbiga aayadda hore ayaa sharaxay asalka ah ee dhacdooyinka oo dhan aadanaha in ay yihiin oo dhan isku mid ah, in halkii Calaqdii ah dhiig, kaas oo ka qayib fud manida.
Markaasuu koodhadh ah shahwada ka timaada cuntada fiican shaandheeyo aadanaha dhulkaa laga qaaday. Oo kuwaasu hormoonnada, calories, fitamiinada iyo waxyaabaha kale, kuwaas oo dhammaan laga soo qaaday dhulka taasi oo dhan waxaa ku jira khudaarta, miraha iyo cuntada caadiga ah hilibka. Markaasaa waxaa u koray nin waaweyn iyo qaan. Qalab ugu muhiimsan si ay isugu xirmaan aadanaha ku wareegsan waa awooda in afaf lagu hadlo, sida xidhiidhka ka mid ah waxa uu dareensan yahay in uu wadnaha. Markaas ayaa sidoo kale ku korodhsadaa, sirdoonka, ka dibna sidoo kale la siiyey xirfadda ee qoraalka.
In qeybta kowaad ayaa si cad hoos u ratings ugu sareeya inay miday ee akhriska iyo qoraalka. Ayuu yiri Sheekh Muhammad Abduh in uu faallo: "Ha yimaadaan dardaarankiisii ​​aayadda qoto dheer oo ka kaamilsan badan sababta danta magabaaban ee akhriska iyo qorista ee dhammaan laamaha cilmiga iyo farxad. Iyada oo ah in marka hore la furay oo dhan Aayaadka si ay u degi doonaa ka dib. "
Ma Sidaas darteed haddii Muslimiinta hesho tilmaamo aayaddan iyo iyagu ma ay fiiro gaar ah u jidadka ee ku aadan weeraryahanka, dharkoodii jeexjeexeen Fiiddeeda ah duubo in daboolo dhammaan ka mid ah aragtida, waayo, sayniska, ama albaabka merampalkan in la xiran si ay u xiray qol mugdi ah, sababtoo ah si xooggan u xiran -erat by gobta ah ilaa iyo inta ay ka haabhaabtaan ku doqon mugdi ah, iyo in baaragaraaf furitaanka dajinta this uusan iyaga farxad, ka dibna iyagu ma ay heli doonaan mar kale weligiis.
Ar-Razi qeexayaa in uu faallo, in laba ayaa la sheegay in uu akhriyo qeybta kowaad ee magaca Ilaah kan abuuray, waxaa ka kooban qudrat, iyo xigmad, iyo aqoon iyo nimco. Wax walba waa dabeecadda Ilaah. Oo aayadda ku xigta Ilaah dalalka gaaro aqoon degdeg ah la Pen ama qalinka, waa calaamad u tahay in ay jiraan ayaa sidoo kale ka mid ah sharciga ugu qoran tahay waa, taas oo aan la shuban karto haddii aan si taxadar leh u dhageystay. Sidaas on labada aayaadka hore tuso Lordship qarsoodi ah, qarsoon oo Ilaahnimadu ay la. Oo saddex sadarka ku xiga ku jira nubuwwat qarsoodi ah, Nabinimo. Oo bal yaa Ilaah ma la yaqaan, haddii aan loo dhiibay gacantii nubuwwat, iyo isu nubuwwat ahaa in aan waxaa jiri, haddii aadan ku ah doonista Ilaah.
Ilaah oo uu hadalkiisii ​​ku Quraanka siinayaa barakadiisa oo ay ku jiraan maal, rizqiga) hawo neefsasho (oxygen) waa cusub, oo kalluunka badda ku, natiijada khayraadka dabiiciga ah, sida batroolka, gaaska dabiiciga ah, dahab, iyo lacag, iyo sarreen, iyo beeraha dalagga / bariis Paddy, sarreen iyo hadhuudh in ay u dhexecya guudo, haddii aadanaha, ama xoolaha, iyo nicmada Eebe (Risqi) waxaa la siiyaa qofka bini'aadamka ah ee kooxaha kala duwan, isirka, jinsiyadda, kala duwanaanta luqadda, iyo kala duwanaanshaha midabka maqaarka, haddii ay ku nool hareeraha dhulbaraha iyo kuwa ku nool Pole Koonfurta, Waqooyi reer Poland, qaaradda Aasiya, Continental Europe, qaaradda Afrika, Continent Australia, Ameerika, iyo quruumaha ku nool badda Pacific, iyo badaha Indian.
Sidoo kale waxa ay haatan muslimay, galaya, Protestant, Hinduism, Budiiska, Shinto, Kong Fu Tse, Zorroaster, animism, iyo kuwa aan diinta Communists (cawaan).
Qayb ku arzuqnay (xoolo) waxay ku xiran tahay dadaalka (dadaal) in ay search oo Risqi ah, haddii helay by bixinta cilmi (aqoon cilmiyeed labadaba, iyo taaban karo), iyo sidoo kale falsafada.
The aqoon sare u badan tahay in uu helay Maalka (mushaar).
Marka beeralay ah beerto bariis / sarreenka la isticmaalayo bilologi sayniska, tusaale ahaan, waxa uu dooran kartaa abuur ah si ay u goosataan beerta wax soo saar badan.
Science waxaa laga heli karaa laba siyood, haddii ay dunidu sayniska, waxaa laga heli karaa dibangku University (koorsooyinka dugsiga / machadka) ama macallimiinta hore u aqoon.
Haddii Science Diinta (Islaamka) Quraanka iyo Xadiiska in la helay by barashada labada waalid, Jaamacadda (dugsiga) iyo sidoo kale Ustad ah (culimada).
Farqiga u dhexeeya waa in Science Adduunka, cilmaaniga ah, waxaa sida caadiga ah isku dayaya in ay keliya heli farxad adduunka.
Iyadoo Science Diinta, farxad u ah ma aha oo kaliya dunida, laakiin sidoo kale Aakhiro waa, maxaa yeelay, sayniska ee diinta (Quraanka iyo Xadiiska) keeni kara adduunka si ikmu gilgishaan, sida aan hunguri in raadinaya hanti (xoolo), xaq u lahayn ee camal saboolka ah iyo kuwa wanaagsan ee inta badan n xoolo aan kasban, iyo sayniska ee Quraanka sidoo kale keeni Dadka in nolosha dhabta ah ma ku jiray dunida (ku meel gaar), laakiin Aakhiro (Samada iyo cadaabta).
In raadinaya maalka waxaan sidoo kale ku hogaamiyay in ay raadsadaan hanti xalaal, ma musuqmaasuqa, dhacaan, oo intaan wax xado ama ay dhacaan xuquuqda dadka kale, cunin sidoo kale u leeyihiin in ay cunaan cuntada kosher (marka laga reebo kuwa reebay sida hilibka doofaarka, dhiig, Bakhtiga (baqtigooda marka laga reebo kalluunka) iyo merorok (jaqaan tubaakada, fatwa Muhammadiyah Majelis ictiqaadsanyahay Indonesia iyo Saudi Arabia sigaarka haram 'dood ku salaysan yahay Quraanka iyo Xadiiska).
Sidaas Science Diinta innagu khasabtey in maalka in aan u isticmaalno Barakooyinka iyo farxad.
Sidee dad badan oo hodan ah oo adduunka ah, fanaaniin, kuwii gabayaaga ugu qanisan caalamka in si dhab ah ku nool ku faraxsan yar (stress) si uu naftiisa u soo afjaro by ismiidaamin ah isticmaalka daroogada ama kiniiniga hurdada (daawada dajiyaha).
Sidee badan oo Muslimiin ah iyo in uu dunida ruux muslim ah hantida oo keliya waxoogaa yar (si dirqi ah ku filan oo ay cunaan oo wax cabbaan) laakiin dareemay qalbigiisa farxad iyo nolol xasilloon, fududaato in Ilaah u siiyey isaga inay horey u maal aan matalno
Isku dar Science Islaamka iyo Syar'i Adduunka
Rahimahullah Shaikh Abdur Rahman bin Nasir As-Xusayo
Dad badan lagu qaldo oo ku saabsan nooca sayniska in uu yahay dhab ah, waa in sayniska in la derso oo la baaray. Waxay soo jiidayaa laba fikrado, iyo lid ku xad-dhaaf ah midba midka kale. Mid ka mid ah waa ka khatar badan tahay kuwa kale.
Opinion waxay marka hore, fikradda ah in sayniska ku eg tahay syar'i sayniska dhab ah waa uun qayb ahaan la xiriira in ay horumar ka mid ah iimaanka, anshaxa iyo cibaadada, oo dhan ma sayniska muujiyay al-Quraanka iyo as-Sunnah oo ka mid ah syar'i sayniska iyo dhammaan instrumentality ee sayniska iyo aqoonta ku saabsan caalamka. Opinion Tan waxay ka timaaddaa kuwa aan wax garad ahayn shareecada si sax ah. Si kastaba ha ahaatee, hadda bilaabeen in ay raadiyaan habab maslahah oo markuu arkay faa'iidada badan ee sayniska ku saabsan caalamka, iyo sidoo kale wax badan oo ka warqabaan tilmaamaha qoraalo diinta farshaxanimada.
Opinion labaad, ra'yi ah in la xaddido sayniska cilmiga casriga ah ay qayb ka yihiin sayniska. Opinion Tani waxay u muuqataa in ay ku keento ka berpalingnya diinta, fiqiga iyo akhlakya. Tani waxay si cad waa qalad aad u dilaa ah, taas oo ay ka dhigi doontaa sida dhex-dhexaadin ah oo ujeeddada. Waxay ka gaaloobi sayniska dhab ah oo nooca in uu yahay mid waxtar leh, hadii aan lagu muujiyey sayniska casriga ah wadajir. Waxa ay la khiyaaneeyey by natiijooyinka kala duwan ee daahfurtay. Waxa ay yihiin kuwa loogu tala galay in hadalka Eebe Ilaaha Qaadirka ah waa:
Oo markuu u yimid rasuulladii (kaasoo loo diray inuu) iyaga oo keenaya haybta ketarangan, waxayna ahaayeen kuwo ku faraxsan aqoonta in dushooda ku taal oo ay ku hareereysan yihiin Cadaabka Eebe Ilaaha Qaadirka ah in ay had iyo jeer xiiso leh perolok waxaa ka mid ah. [Al-Ghafir / 40: 83]
Waxay aad ugu sharfan yihiin aqoon, oo kibir iyo aflagaado sayniska Rasuulladu. Sidaas darteed, waxay yihiin cadaab overwritten ay Keek iyo hanjabaad siiyey rasuullo been ah Eebe Ilaaha Qaadirka ah. Waxay la xanuujiyey ilaa adduunka la xiritaanka ee wadnaha, indhaha iyo dhegaysanaya, oo sidaas daraaddeed ma ay arki karaan runta.
Dhab cadaabka aakhiraana daran oo hadhid badan. [Taha / 20: 127]
Oo iyana waxay ku ma ayna gargaare ah Cadaabka Eebe Subhanahu wa Jannatul. [Ghafir / 40: 21]
SAYNISKA FAA'IIDO EE AL-Quraanka iyo Sunnaha
Dabeecadda iyo ujeedada aqoon waxtar leh ee al-Quraanka iyo as-Sunnah waa sayniska oo keena oo dhan gool sarajoogga, taasoo keentay inuu xukumo falalka faa'iido, ma jiro wax farqi u dhexeeya sayniska la xidhiidha dunida iyo sidoo kale kuwa la xiriira nolosha. Sidaas, kuwaas oo dhammaantood u horseedi dadka waddada iyo jidka toosan, hagaajin karaa iyo in la kordhiyo fiqiga moral iyo dhaqanka, markaas waa sayniska.
Science waxaa loo qaybiyaa laba: hadafka iyo aaladahooda (dhex-) taas oo keeni karta in ay wax gool ah.
Hadafku wuxuu yahay oo dhan sayniska in hagaajinaysaa diinta, halka hab ay yihiin oo dhan sayniska taageera gool ah sida cilmiga luqada carabiga iyo cilmiga kale, oo ay ku jiraan sayniska ku saabsan caalamka taas oo horseeday ma'rifatullah (aqoonta Alle), aqoonta Isaga oo midnimada iyo si kaamil ah, ayaa sidoo kale keeney in ay runta gartaan in ay Rasuulladiisa. Miro kale waa in ay gacan ka cibaadada iyo siin Eebe l mahad, iyo sidoo kale gacan ka fulinta diinta awoodaan. Waayo, runtii, Alle sakhiray caalamka noogu iyo Alle nagu amreen in aan qabaa iyo isku dayaan in ay qodaan ilaa wax ay muhiim tahay, faa'iido labada diinta iyo sidoo kale nolosha dunida. Amarka amarrada wax macno leh si ay u fuliyaan waxa shay oo ah amarkiisa iyo amarka sidoo kale si ay u hirgeliyaan dhammaan dhex- iyo falsifies fulinta amarka.
Waxa ay ina dhiiri in la ogaado cilmiga dabiiciga ah waxaa loo isticmaali karaa si ay u sahamiyaan faa'iidooyinka in lagu Ilaahay noo dhan. Sababtoo ah faa'iidooyinka iyo natiijada lama gaari karo haddii aan dadaal, fikirka iyo cilmi-dhaqanka. Alle wuxuu leeyahay,
Waxaana ku Abuuray bir ah in ku jira iyada xoog badan oo tiro balaadhan oo ah faa'iidooyinka ugu ah dadka, [al-Xaadiid / 57: 25]
Gargaarkan waxaa lama gaari mooyee, idinkoo kala garanaya cilmiga la xiriira si ay natiijada ugu badan.
Dad badan oo qoraalka ee Quraanka iyo Sunnaha oo amaanay sayniska iyo khubaro ku amaanay aqoonta iyo baahida loo qabo in mudnaanta badan saynisyahan kasta oo kale. Alle wuxuu leeyahay,
Ma jiraa qof oo ka mid ah ciddii wax garan dadka aan ogayn? [Az-Zumar / 39: 9]
Waxay yihiin kuwa Dhawrsada Eebe Ilaaha Qaadirka ah oo isaga ogaato
Illeen cabsida Ilaaha Qaadirka Eebe addoomadiisa, culimada kaliya ka mid ah. [Fatir / 35: 28]
Alle dadka aan wax ogayn inaad weydiiso saynisyahan ku amray.
Alle ayaa sidoo kale amray Muslimiinta si ay u qabtaan noocyo badan oo cibaadada iyo laga mamnuucay in gurigu waa nijaasaysan yahay oo dhan. Amarradiisa iyo reebay inaan la samayn karaa marka laga reebo dib markii aqoonta iyo garan. Sidaas daraaddeed amarradaada oo laga reebay in ay muujinaysaa sida loogu baahan yahay waxbarasho wax walba oo la xiriira amarka iyo mamnuucida laftiisa. Sidoo kale Ilaahay ogolaan mu'amalat ugu (wax walba oo la xiriira in ay ka mid aadanuhu intraksi) Wuxuuna reebi kuwa kale. Si taas loo sameeyo si ka dhigan tahay in waa in aan awoodin in la kala saaro mu'amalah waxaa loo ogol yahay oo aan la ogolayn. Soocidda noocan oo kale ah aan la samayn karaa marka laga reebo by aqoon. Alle cambaareeyey dadka aan wax ogayn xuduudda in ay ahayd Alle soo dejiyey u tagaan rasuulladii ee Kitaabka iyo Sunnaha.
Waxaa ka mid ah amarrada Alle l waa jihad in amarka aayado badan, iyo amarkii si ay u diyaariyaan awoodda in la samayn karaa in ay qabtaan cadowga iyo is ogow iyaga ka mid ah. Amarradan waxa aan la ogaaday mooyee, waxbarasho farsamooyin dagaal iyo hub.
Eebe Ilaaha Qaadirka ah ayaa sidoo kale lagu amray in ay bartaan ganacsiga iyo cilmiga dhaqaalaha, xitaa Alle amray in ay Imtixaamana Agoonta weli yihiin kuwo yar si ay u ogaadaan sayniska iyo ganacsiga shuqul hor aaminay karaa alaabtaada shakhsiyeed. Alle wuxuu leeyahay,
Imtixaamana Agoonta markay Gaadhaan Guur. Markaas, marka idinla tahay in ay qabaan caqli (ilaaliyaan maal, smart) ah, ka dibna ku wareejiyo iyaga Xoolahooda. [An-Nisa / 4: 6]
In aayadda kor ku xusan, Alle aan la amray in ay soo wareejiyaan hantida ilaa ay la og yahay in ay leeyihiin aqoon ku saabsan sida loo maareeyo hantida iyo og sayniska ee ganacsiga.
Tani Shareecada kaamil ah na fari inay wax ka bartaan noocyada kala duwan ee aqoonta waxtar leh; laga bilaabo sayniska ee Tawxiidku, Usûluddîn, tukan sayniska iyo sharciga, cilmiga Carabi, sayniska iyo siyaasadda dhaqaalaha, iyo cilmiga karaan si loo hagaajiyo xaaladaha gaarka ah iyo bulshada.
Aqoon No muhiim ah aduunka iyo aakhiraba haddaan lagu baray oo lagu dhiiri by sharcigan. Sidaas darteed, isagga oo in Diinta cilmiga diinta iyo cilmiga dabiiciga ah. Xitaa cilmiga adduunka waxtar leh la galin karaa qayb ka mid ah cilmiga diinta.
Kuwa buunbuuniyeen, waxay ka dhigaan sayniska ku kooban yahay qayb ka mid ah aqoonta diinta keliya. Indeed, waxa ay ka dhaceen Baadida dilaa ah.
Halkii caabudeen materialist ah, waxay ku gartay in sayniska run ku eg tahay sayniska dabiiciga ah. Waxay ka Gaaloobi cilmiga kale, waxay si fido diinta iyo anshaxa ay ku kharribeen. Midhaha ay sayniska waxyaabaha kaliya in oomanaha ah, ma ay maskaxda iyo nafsada, midna midka daahiriyo aawadeed karin. Science iyaga waxyeello ka sii badan mustaqbalka wanaagsan. Waxa keliya oo ay ka faa'iidaystaan ​​horumar ah ee alaabta iyo ikhtiraac cusub oo keliya, laakiin waxa ay u hesho iyadaa u ah labada dhinac,
Marka hore, sayniska noqon lahaa masiibada ugu weyn iyaga iyo aadanaha, sababta oo ah kaliya sayniska waxaa lagu keenay burburinta, dagaal iyo halligaad iyo baabbi'in.
Labaad, la aqoon in ay, waxay noqon doonaan kuwa kibirka leh oo iskibriya in ay dhicin inay ku xumayso sayniska Rasuulladu iyo xukumi falalka diinta.
Sesungguhhnya Kuwa ku doodaya saabsan oo aayaadka Eebe ah sabab kasta oo aan iyaga waxba Laabta laakiin kaliya (doonayaan) weynaanta in ay mararka qaar aan u gaari doonaan, ka dibna weydii ilaalinta Eebe. Illeen isagaa waa Maqle, ee arkaya wax kasta. [Ghafir / 40: 56]
Iyada oo sharaxaad kor ku xusan, waxa aanu ku ogaan karaan in aqoonta ay waxtar leh adduunka iyo aakhiro waa sayniska ka timaada kitaabka Alle iyo Sunnada n Nabiga oo ay ku jiraan nooca dacayadeed oo ka mid ah aqoon waxtar leh ah, ma jiro wax farqi u dhexeeya sayniska asaasiga ah iyo laan sayniska , mana fiqiga iyo sayniska, sixina siman adduunka. Sida diinta Islaamka waxaa ka mid ah iimaanka waajib in runta oo dhan, aamin ah u buugagga Alle soo dejiyey, iyo Rasuulladii oo dhan oo Alle soo diray. Walhamdulillâh
(La kiciyey buugga ad-Din al-as-Abduh Jami'a Yahullu Masyakil)
[Guuriyeen ka edition magazine ee As-Sunnah 12 / Year XVII / 1435H / 2014 ka. Published Lajnah Foundation Istiqomah Surakarta, JL. Solo - Solo Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo 57 183 Tel. 0271-858197 Fax 0271-858196]
Posted by needsjobslowongankerja at 8:00 AM